दिनेबारे बाइबलले के भन्छ? बाइबल पदहरू
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) उरुन्ड् उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गा गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चीन (हाका) चेक जर्जियन जर्मन जापानी टगालोग टर्किश टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पारसी पेन्सिल्भेनिया जर्मन पोर्चुगिज पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बिस्लामा ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज भेन्डा मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा वेल्श शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सुन्डा सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
दिनेबारे बाइबलले के सिकाउँछ?
बाइबल हामीलाई राजीखुसीले अनि उचित मनसाय राखेर दिन सिकाउँछ। यसो गर्दा लिने व्यक्‍ति मात्रै होइन दिने व्यक्‍ति पनि आनन्दित हुन सक्छ। (हितोपदेश ११:२५; लुका ६:३८) येसुले यसो भन्‍नुभयो: “लिनुमा भन्दा दिनुमा धेरै आनन्द छ।”—प्रेषित २०:३५.
कसरी दिँदा परमेश्‍वर खुसी हुनुहुन्छ?
कसरी दिँदा परमेश्‍वर मन पराउनुहुन्‍न?
राजीखुसीले दियौँ भने परमेश्‍वर खुसी हुनुहुन्छ। बाइबल यसो भन्छ, “हरेक मानिसले आफ्नो मनमा निर्णय गरेबमोजिम गरोस्‌, मन नलागी-नलागी वा करकापमा परेर होइन किनकि खुसीसाथ दिनेलाई परमेश्‍वर प्रेम गर्नुहुन्छ।”—२ कोरिन्थी ९:७.
मनैदेखि दिनु भनेको उपासनाको एउटा भाग हो र यसलाई परमेश्‍वर स्विकार्नु हुन्छ। (याकुब १:२७) खाँचोमा परेकाहरूलाई उदार भई मदत गऱ्‍यौँ भने परमेश्‍वरसँगै काम गरिरहेका हुन्छौँ अनि यस्तो दयालु कामलाई परमेश्‍वर आफूलाई सापटी दिएसरह ठान्‍नुहुन्छ। (हितोपदेश १९:१७) उदार भई दिने व्यक्‍तिलाई परमेश्‍वर इनाम दिनुहुन्छ भनी बाइबल सिकाउँछ।—लुका १४:१२-१४.
खराब मनसाय राखेर दिँदा, जस्तै:
अरूलाई देखाउन।—मत्ति ६:२.
केही पाउन।—लुका १४:१२-१४.
पैसा तिरेर मुक्‍ति पाउन।—भजन ४९:६, ७.
परमेश्‍वरले मन नपराउनुहुने कामकुराको लागि दिँदा। उदाहरणको लागि, जुवा खेल्न वा लागूपदार्थ सेवन गर्न अनि रक्सी पिउनको लागि कसैलाई पैसा दिन्छौँ भने त्यो गलत हो। (१ कोरिन्थी ६:९, १०; २ कोरिन्थी ७:१) त्यसैगरि, काम गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नचाहने व्यक्‍तिहरूलाई दिनु उचित होइन।—२ थिस्सलोनिकी ३:१०.
पारिवारिक जिम्मेवारी पूरा गर्न बाधा पुऱ्‍याउँदा। परिवारको शिरले परिवारको आवश्‍यकता पूरा गर्नुपर्छ भनेर बाइबलले सिकाउँछ। (१ तिमोथि ५:८) त्यसकारण परिवारको शिरले आफ्नो परिवारको आवश्‍यकता पूरा गर्न नै नसक्ने गरी अरूलाई दिनु पनि राम्रो होइन। परमेश्‍वरलाई भेटी अर्पण गरेपछि आफ्नो आमाबुबाको हेरचाह गर्नुपर्दैन भनेर सोच्ने मानिसहरूको येसुले निन्दा गर्नुभयो।—मर्कुस ७:९-१३.
हितोपदेश ११:२५: “मन खोलेर दिने मानिसको उन्‍नति हुन्छ अनि जसले अरूलाई स्फूर्ति दिन्छ, ऊ आफैले पनि स्फूर्ति पाउँछ।”
अर्थ: दिँदा लिने व्यक्‍ति मात्रै होइन दिने व्यक्‍ति पनि आनन्दित हुन्छ।
हितोपदेश १९:१७: “गरिबलाई दया देखाउनु यहोवालाई सापटी दिनुजस्तै हो; त्यसको इनाम उहाँले दिनुहुन्छ।”
अर्थ: खाँचोमा परेकाहरूलाई मदत गर्नेहरूप्रति परमेश्‍वर ऋणी महसुस गर्नुहुन्छ। त्यसरी उदारता देखाएकोमा उहाँ तिनीहरूलाई इनाम पनि दिनुहुन्छ।
मत्ति ६:२: “यसकारण तिमीले दानपुण्य गर्दा कपटीहरूले जस्तो झ्याली नपिट्‌नू किनकि तिनीहरू मानिसहरूबाट प्रशंसा बटुल्न . . . झ्याली पिट्‌छन्‌।”
अर्थ: अरूलाई देखाउनको लागि मात्र हामीले दिने गर्नु हुँदैन।
प्रेषित २०:३५: “लिनुमा भन्दा दिनुमा धेरै आनन्द छ।”
अर्थ: मनैदेखि दिँदा आनन्दित हुन सकिन्छ।
२ कोरिन्थी ९:७: “हरेक मानिसले आफ्नो मनमा निर्णय गरेबमोजिम गरोस्‌, मन नलागी-नलागी वा करकापमा परेर होइन किनकि खुसीसाथ दिनेलाई परमेश्‍वर प्रेम गर्नुहुन्छ।”
अर्थ: राजीखुसीले दिँदा परमेश्‍वरलाई खुसी लाग्छ।
नैतिकता र जीवनशैली विश्‍वास र उपासना बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरूको जवाफ
दिंदा तपाईंलाई र अरूलाई पनि लाभ हुन्छ। त्यसले आत्मीयता र मित्रता बढाउँछ। हामी कसरी खुसीसाथ दिने व्यक्ति हुन सक्छौं?
आनन्दतर्फ लैजाने बाटो—सन्तुष्टि र उदारता
उत्तम उपहारको खोजी